Ciraaq: Mucaaradka oo dib loo riixayo - BBC Somali
Ciraaq: Mucaaradka oo dib loo riixayo
15 Juunyo 2014
Image caption Shiico badan ayaa ku biieraysa askarta si ay ula dagaalamaan sunniyiinta mucaaradka.
Wararka ka imaanaya Ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo maleeshiyiinta shiicada ay dib u celinayaan maleeshiyada Suniyiinta waqooyiga Baqdad. Ciidanka ayaa kala wareegay magaalooyin mucaaradka.
Laakiin magaalooyinka muhiimka ah ee Tikrit iyo Masul ayaa wali ay mucaaradka haystaan.
Waqooyi bari magaalo madaxda ayaa diyaaradaha helekobtarka ee dowladda ay si qalad ah u weerareen dagaalyahanada Kurdishka oo joogay meel ay ka baxeen Sunniyiinta. Waxaa ku dhintay weerarka toddobo qof.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka, John Kerry, ayaa ka digay in taageerada Maraykanka ee looga hortagayo islaamiyiinta ay guulaysan karto oo kaliya, hadii hogaamiyayaasha Ciraaq ay diyaar u yihiin inay heshiiyaan.
Markabka diyaaradaha qaada ee Maraykanka ayaa la keenay gobolka dagaalka socda darteed.